Hanandratra Ny “Herin’ny Isika” Ny Blog Action Day 2012 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2012 10:48 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Magyar, Español, Français, русский, Português, አማርኛ, Ελληνικά, English
Vonona hitendry lahatsoratra amin'ny alalan'ny tànana kinga avokoa ireo bilaogera avy amin'ny firenena 95. Ao anatin'ny andro iray, hibilaogy mikasika lohahevitra iray iombonona izy ireo ka hamoaka fitambaranà tantara samihafa loko sy fampahatsiarovantena izay hipàka amin'ireo mpihaino an-tapitrisany. Amin'ny 15 Oktobra 2012 ny Blog Action Day!
Hatramin'ny taona 2007, natao hanentanana mikasika lohahevitra lehibe ny Blog Action Day mba hanamora ny fiaraha-mientana itambarambe ataon'ny bilaogy isan-taona. Nandritra ny taona maro, nitatitra ny hetsika Blog Action Day hatrany ny Global Voices ary nampisongadina lohahevitra toy ny tontolo iainana, fahantrana, fiovan'ny toetr'andro, rano ary sakafo. Tsy inona indray akory ny lohahevitra amin'ity taona ity fa ny ‘The Power of We- Ny herin'ny Isika (Izahay)’.
Inona no hosoratana momba ‘Ny Herin'ny Isika'?
Sary: Maria Grabowski
Efa mba nahatsapa ny herin'izany hoe miasa miaraka mba hitondra fiovana tsara izany ve ianao? Manorata momba ny ezaka efa nataonao amin'ny fiadiana (fiezahana – fikatrohana) zavatra (na tranga na lohahevitra) iray, na koa vondrona nahasarika ny sainao – raha ambara fohifohy: miasa miaraka ny olona mba hitondra fiovana. Afaka manoratra amin'ny fiteny izay tianao ianao, na firenena avy aiza na avy aiza.
Misorata anarana eto raha handray anjara amin'ny Blog Action Day 2012 momba ny lohahevitra ‘Ny herin'ny isika” amin'ny 15 Oktobra ary mahazoa mpijery an-tapitrisany. Araho ao amin'ny Twitter ny tenifototra #BAD12 raha te-hanaraka ny vaovao farany.
Amin'ny 15 Oktobra, alefanay eto amin'ny Global Voices ny lisitr'ireo mpandray anjara manerantany izay mpikambana ato amin'ny Global Voices – aza miala an!